Duufaan joogto ah oo daacuun ah oo ku yaal waqooyiga - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Boolisku wuxuu ku geeriyooday daacuunka Waqooyiga
daacuunka dillaacay ayaa u muuqda inuu dib u soo ceshaday. Si kastaba ha ahaatee, Dr. Caro Saciido, Wakiilka Gobolka ee Caafimaadka Qaranka ee Caafimaadka Dadweynaha, ayaa xaqiijiyay in war saxaafadeed uu soo saaray, "dib u soo noqoshada cudurka epidemic ka dib shan bilood oo qadhaadh ah".
Sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka, saddex qoys oo ku yaala degmooyinka caafimaadka ee Pitoa iyo Garoua 1er ayaa hadda ka walaacsan. Xaaladdani waxa ay qasabtay baahida loo qabo in la xoojiyo farsamooyinka waxqabadka ee adeegyada hoos loogu dhigay Wasaaradda Caafimaadka Bulshada iyada oo lala kaashanayo la-hawlgalayaasheeda.
Tani waa, ka mid ah kuwa kale, ka hortagga iyada oo loo marayo wacyi galinta ee beelaha, kor u qaadida nadaafadda iyo fayadhowrka by qaybinta xirmooyinka degmooyinka caafimaadka, jeermi joogtada ah ee dhammaan goobaha xiriiri la tuhunsan yahay bukaanka.
Sanadkii la soo dhaafay, cudurka daacuunka ee daacuunka ayaa ku dhintay 60 qof oo ku nool Cameroon, oo ay ku jirto in ka badan 40 gobolka waqooyiga oo kaliya, diiradda ugu weyn ee cudurka. Daacuunka ayaa sidoo kale saameyn ku leh gobollada Waqooyiga iyo Bartamaha. https://www.lebledparle.com/societe/1107322-sante-un-gendarme-meurt-du-cholera-dans-le-nord
Eeyooyinka waxay awoodaan inay ogaadaan kansarka 97% kalsooni